Zavamaniry voninkazo natiora | Pejy misy sary maimaim-poana ho an'ny finday
Efitra famolavolana ao amin'ny zaridaina
Pejy maro momba ny zaridaina sy zaridaina zaridaina
Ny endriky ny zaridaina dia manolotra ny mpamboly mpihinana rehetra manana fanamby manokana. Rehefa mieritreritra ireo fitsipika samihafa dia tokony hodinihina, mba hahatonga azy io hanana sary ankapobeny.
Ny fepetra fitsangatsanganana ao amin'ny zaridaina
Raha ny fambolena no tena ampiasaina mba hanomezana ny fianakaviana voankazo sy legioma vaovao, ny zavamaniry ornamana dia manana andraikitra hanome ny trano fanorenana sy hanatsarana izany amin'ny fomba mazava.
Ny zaridia matetika dia manome fotoana mihoatra noho ireo fotoana mangina
Ny safidy dia miankina, amin'ny zavatra hafa, amin'ny tsiron'ny tsirairay amin'ny tompona zaridaina. Tokony horaisina ihany koa ny lafiny hafa mba hahafahan'ny zaridaina hankafy ny sainao rehetra.
Ny karazan-javamaniry rehetra eto an-tany dia manana ny fangatahany manokana eo amin'ilay toerana, ny tany sy ny toetr'andro. Alohan'ny fikarakaran'ny mpamboly fikarakarana ny zaridaina amin'ny zaridaina, dia tokony hampahafantatra ny toe-javatra izy. Mora kokoa ny manaiky ny fepetra efa misy ary ny mamboly afa-tsy ireo karazana izay afaka miatrika azy ireo fa tsy misafidy karazam-biby tena tsara hanahafana azy ireo. Ankoatra izany, ny karazam-panodinana mitovy amin'ny tontolo iainany matetika dia mampifanaraka tsara ny fahitana eo amin'ny tsirairay.
Miasa ihany ny garda raha misy trano noforonina ao aminy. Noho izany, manana safidy maro azo atao ny mpamboly hobby. Ny haavon-tsavony dia mety ho azo ampiasaina amin'ny fampiasana zavamaniry misy haavony maro. Ny mpamboly dia mahatratra ny fizarazarana avo lenta amin'ny fananganana fefy, rindrina na farafaharatsiny hafa.
Ny zavamaniry dia manana anjara toerana manan-danja eo amin'ny fanorenana anatiny. Amin'ny maha solitao azy ireo dia afaka manatsara ny fahatsapana ara-jeografika amin'ny sehatra sasantsasany izy ireo, ao anatin'ny vondrona izay ahafahany mamorona ny zaridaina. Izy ireo koa dia mametraka fifindrana eo amin'ny ambaratonga ambany sy ambony ambony amin'ny zaridaina.
Aza mividy zavamaniry misy poizina fotsiny
Na eo aza ny hatsaran-tarehy rehetra, tsy ny zavamaniry rehetra dia mety ho an'ny zaridaina. Raha manan-janaka na biby fiompy ianao, dia mifidiana karazana tsy misy poizina. Eto, ilay mpamboly hobby dia tokony hahafantatra fa tsy ny zavamaniry misy poizina amin'ny olona tsirairay sy ny biby rehetra dia mitovy amin'ny toaka. Ankoatra izany, ny ampahany amin'ny zavamaniry dia mety ho azo hanina, fa ny hafa kosa ny zavamaniry iray dia sokajina ho goavam-be. Mba hisorohana ny mety hisian'ny poizina, dia tsy tokony hambolena ireo zavamaniry ireo eo anatrehan'ny antokon'olona mety hampidi-doza.
trano bongony zaridaina
Manamboara saha tsara
Compost tao an-jaridaina
Manaova fanatanjahantena ao amin'ny zaridaina
Biby mihinana amin'ny ririnina
Mafana ao an-jaridaina
Ahitsio tsara ny zavamaniry
Toeram-pandehanana mitahiry rano ao Balkon
Ny labozia dia mamolaka tsara
Balcony zavamaniry ho an'ny balcony
Balcony mitazona toro-hevitra ankapobeny
Zavamaniry misy poizina ao amin'ny zaridaina
Toerana tsara ho an'ny zaridaina an-jaridaina
Amboary tsara ny zaridaina
Zavamaniry zavamaniry ao an-jaridaina
Zavamaniry ao an-jaridaina
Gingko biloba ho toy ny vokatra
Fikarakarana Rose ho an'ny mpandray anjara
Torohevitra momba ny fikarakarana ny trano-trano
Indostrian'ny indostria ho an'ny olona miasa
Indostrian'ny indostrian'ny hazavana ambany
Zavamaniry sy bibikely
Manandrama ny natiora amin'ny ankizy
Ny filalaovana ivelany dia mampifaly ny ankizy
Torohevitra ho an'ny fikarakarana orkide tsara
Moa ve misy lohahevitra manokana ao amin'ny lifestyle Forum misy anao? Faly izahay manoratra lohahevitra vaovao izay tsy voatery mifandray amin'ny fianakaviana sy ny ankizy. Miresaha aminay!
Manandramana ny natiora ary araho ny sainao
Fivarotam-panafody mandritra ny alikaola: alim-pandrefesana 4 avy amin'ny ...